Dhisida mesh aagga UTM oo leh Excel iyo AutoCAD. - Gofumed
Maarso, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Cartografia
Wac wixii aad rabto, khariidadaha taxanaha ama xajiyeynta kartoonka, jidka geodesic, marka aad u baahan tahay magaca waa ugu yaraan. Si tan loo shaqeeyo barnaamijka GIS waa inuu ahaadaa mid sahlan, laakiin malaha waxa aan hayno waa AutoCAD.
Dhowr maalmood ka hor waxaan sharaxay asalka jaantuska sawirka, iyo macnaha ereyga UTM isuduwid; isticmaali doonaa isla aagga 16 tusaale, laakiin waxa ay khuseysaa oo kale ah, dhidibka dhexe ee strip waa line kaliya in gebi ahaanba toosan oo hufan waa in this duwo = 300,000.
Xadhiggu wuxuu leeyahay 6, haddii aan aragno in uu ka soo kordhay dhinaca woqooyiga ilaa aagagga, halkaasoo ay u ekaato eber; ka dibna dhinaca koonfureed waxaa la yareeyaa, lakinna cirifka ayaa la mid ah, lakinse waa qeybta ka soo horjeeda. Waa hagaag, sida loo dhiso
1 Aan dhisno iskudhafyada leh Excel
Tani, si fudud u isticmaal qalabkii hore ayaan u isticmaalnay si aad u badasho isku-duwidda juquraafi ilaa UTM, waxaan dooran doonaa WGS84, ka dibna waxaan dejinayaa dalabka iyo dareenka dulsaarka:
Dhulalka: Of Ecuador woqooyi, qayb kasta ee ka mid ah imaten ee uu leeyahay 8 degrees in warqaddii w, kaliya x leeyahay 12 degrees si N si W 9 lahaa × 8 = 72, marka daray yimid 12 si 84 darajo ee u Safra waqooyiga. Si aad u fiirsan Hemisphere ka Koonfureed isku noqon lahaa, laakiin halkii ay ka S. N ah GoogleEarth ma uu doonaynin inuu tuso inteeda kale si looga fogaado dhibaato ah in qeybta u baahan tahay xisaab ah la koobi karayn. Xaaladdan oo kale waxaan dhisi doonaa W. qeybta
Markaad ku dhisto Excel waxaan haysanaa shaxda soo socota:
Dhererka. Haddii aan eegno in la dhiso line bidix u baahan tahay oo kaliya oo dhererkiisuna wuxuu soohdinta u dhaxaysa 15 iyo 16 (90 degrees) meelaha. In la dhiso xuduudda saxda ah, miiska ii abuuraa dhibaato sababtoo ah dul dhererka 84, ka wadataa isla laakiin aagga 17 waan xisaabiyaa, sidaas darteed waxaan u isticmaali doonaa 84 degrees, daqiiqo eber 0.00000001 seconds, sidaas qiimaha had iyo jeer igu dhaco degaanka 16 sida duwo waa laba jajab tobanle ma xogta khasaaro.
2 Ku sawir dhibcooyinka leh AutoCAD
Si aad ugu soo qaadato AutoCAD, waa sahlan, column R wuxuu leeyahay isku-xidhka la sameeyo kaashka. Sidaa darteed waxaan haynaa waxyaabahan ka mid ah santuuqaan loo minguuriyey Excel, ka dibna AutoCAD, waxaan u hawlgaleynaa taliska dhibcaha (jumlad / dhibic / dhibco badan) waxaanan ku dhejineynaa xariiqda taliska. Isla markiiba waxaan leenahay dhibcahan mesh this soo baxay.
Haddii aadan arkin, bedel qaabka qaabka / qaabka dhibcaha oo ka tag 5% marka loo eego shaashadda.
Tallaabada xigta waxay noqon kartaa in la sawirto khadadka ku soo biiraya mesh this, laakiin aan isku dayno inaan isku darsano Excel iyo AutoCAD, sababtoo ah haddii meshu uu cufan yahay waxaanu lahaan doonaa qaybo badan oo dhibco ah oo la sameeyo.
3 Dhiso khadadka tooska ah.
Si aad tan u sameyso waxa aad sameeyneysaa sidii aad u dhisi lahayd dhibcooyinka, kaliya halkii laga isticmaali lahaa barta taliska ee aan adeegsanayno xariiqda taliska; iyo diyaar, kaliya tirtiro line bidix.
Hubi in la samayn karo oo keliya marka la sawirayo, laakiin xusuuso in mishiinkani yahay qaybaha 8 oo kaliya, markaad samayso meshes qashin waxaad helaysaa adeegga.
4. Dhisidda xariijimo siman.
Si aad u sameyso xariiqyada jiifka ah oo keliya iskudhafka xuduudda bidix ee ku yaala midigta iyo midigta midigkan iskuxirka xuduudaha saxda ah. Tani waxay kuugu fiicnaanaysaa santuuq kale oo leh nuqul khaas ah iyo dheego, qiimaha macmacaanka, markaa adigoon haysanin dhibaatooyin nuqullada koobiyeynta, waa inaad sii jirtaa sida muuqaalka.
Waxyaabaha xigta waa inay doortaan mawduuca labadaba, ka dibna AutoCAD waa inaad nuqul ka qaadataa, AutoCAD waxaad samayn kartaa xariiq amar ah iyo jeegga.
iyo okay, kaliya tirtiro dheellitirka.
Mar kale, dad badan oo u muuqdaan kuwo aan loo baahnayn, waayo, nidaamka this, laakiin marka aad mesh denser noqon doonaa porqeu aad wax ku ool ah ay nadiifiso dheeraadka ah noqon doonaa mid sahlan sida khadadka dheer in si fudud loo soo xulay karo iyo saaro. Sidaas daraaddeed waxaan soo tago in aad hal-abuurka sida in ay ka faa'iidaystaan ​​nidaamkan si ay u dhisaan mesh buuxda ugu qolfo leh oo kala duwan Rubuca.
Waa cadahay in waxa aan haysto aanu ahayn mesh geertoon, sababtoo ah taasi ma aha AutoCAD, waxa aan haysto waa maskaxda leh iskuxirka UTM oo u dhigma cawska iyo juquraafi juqraafi ah. Si aad u dhaadhiciso, waa in la sameeyaa ArcGIS, Cadcorp, Map3D, kala cayncayn ah, Microstation Goegraphics ama codsi kasta oo la mid ah kuwan oo kale. Laakiin waxaan arki doonaa munaasabad kale, sababtoo ah waa in aan maanka ku heyno in unugyada ...
Post Previous«Previous Waa maxay mucjisooyinka dabiiciga ah ee 7 ee ku guuleysan doona
Post Next Khaladka ugu fudud markaad dhiseysid mashiinka kartoonka: Qaybta khariidadaNext »
14 Jawaab in "Dhismo Mesh ee aagga UTM oo leh Excel iyo AutoCAD."
Miyaad sharraxi kartaa sida aan u soo daabacayo shaati-ka-dhigista isku-xirka UTM? Waad ku mahadsantihiin
Midkasta oo ka mid ah qaab-dhismeedkaas jira, ka raadi kaliya '' template 'si loogu beddelo isku-duwayaasha juqraafi ahaan UTM "Google.
Waa inaad u beddeshaa dariiqyada qaab qaab degg ah si aad ugu aragto AutoCAD. Waad u isticmaali kartaa Babel si aad ugu badasho. Haddii lagu soo qaatay gPS-da ayaa durba la siiyaa juquraafi ahaan.
Sababtoo ah isku-xireyaasha bariga ee aagga UTM ayaa leh kala duwanaanshahooda.
Xarunta, suusho dhexe waa 500,000 iyo sidaas si la mid marnaba negative noqon duwo, laakiin haddii reproyectas in ay meel kale, waxaa iska cad in aad u fiirso doonaa negative.
Ma aha macno u yeelashada hanti hal meel ah si loola dhaqmo meel kale, sababtoo ah waxaad dhigeysaa meesha aan ka tirsanayn.
Haddii ay tahay xogta ku dhejisan xuduudda waa inaad isticmaashaa isku-duwidda juqraafi.
Elder isagu wuxuu leeyahay:
Subax wanaagsan Waxaan hayaa su’aal; maxaa yeelay Arcgis markii aan mashruuc khariidad juquraafi ah ka sameeyay aagga 18SUR ilaa aagga '19SUR' ee bariga isku xidha; waxay umuuqdaan kuwo taban; Waa maxay dhibaatadu, fadlan qof ayaa i caawin kara. boostada waa elder27@gmail.com. mahadsanid.
Subax wanaagsan Ma ii sheegi kartaa barnaamijka aan u adeegsanayo si aan u badalo isku-duwidda juqraafiga ilaa WGS84, iyo su'aal kale oo la mid ah sida hoos timaad GPS-ga ah ee Garmin si Autocad ah, iyo sida loo daba-tago; mahadsanid, fadlan ii soo qor boostada elder27@gmail.com; Anigu weligayba waan u mahad naqayaa.
Ku dhoofi kml barnaamij kasta oo GIS ah
dillaac isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan haystaa sawir leh iskudhacyo aan ikhtiyaari ah oo ka dhajisey autocad ilaa dhulka google si loo helo isku-duwidii
Anigu ma fahmin
Anigu ma fahmayo su'aalaha si fiican, waxaan u maleynayaa inaad macnaheedu tahay isku-duwaha x, y oo ah qaabka dusha qaybta.
waxaad halkaa ku dhejisaa oo aad aragtaa guryaha
Marka la eego mawduuca isku-duwaha UTM, waxaan ku sawirayaa khariidad ku taala Auto Cad oo ah jahawareer, waxaanan doonayaa inaan ogaado waxa ay udub dhexaad u tahay diyaarad diyaaradeed.
Sideen ku ogaan karaa?
Garcias badan, ma ogi sida aan rabay inaan tan u sameeyo.
Mar labaad waad ku mahadsantihiin inaad wadaagto aqoontaada
En boggan Gabriel Ortiz waa waxa aad raadineyso
Carlos Azabache isagu wuxuu leeyahay:
Subax wacan, waxaan i siin kartaa macluumaad ku saabsan sida loo sameeyo isku xirka diinta ka gacanta, ayaan u baahan software in ay ogaadaan hawshan mahad ka hor. aad bay u mahad info in loo fududeeyo karo si uu u gudbiyo aan mail carlos_bmx@hotmail.com
ade Carlos Azabache